ဥရောပအိပ်မက်ကိုတွေ့ကြုံခံစား:5မဖြစ်မနေ - လည်ပတ်နိုင်ငံများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > အိုက်စလန်သို့သွားပါ > ဥရောပအိပ်မက်ကိုတွေ့ကြုံခံစား:5မဖြစ်မနေ - လည်ပတ်နိုင်ငံများ
တက်ကြွမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဥရောပသည် ဦး ဆောင်တိုက်ကြီးဖြစ်သည်, နေရာအနှံ့, နှင့်ပျော်စရာ - ပြည့်ဝခေတ်သစ်မြို့ကြီးများ. ဗိသုကာဆိုင်ရာအံ့ဖွယ်အမှုများများစွာရှိပါသည်, ပြတိုက်, သငျသညျစဉ်းစားချင်ပါတယ်တိုင်းဥရောပတိုင်းပြည်ရှိစားသောက်ဆိုင်များ. တိုက်ကြီးတစ်လျှောက်ရှိ nightlife နှင့်အစားအစာများသည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်. တိုက်ကြီးရှိတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝဆွဲဆောင်မှုများသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပြီးကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်. ဥရောပတိုက်ရဲ့အချက်အချာနဲ့တိုက်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့လမ်းကွန်ရက်တွေကြောင့်ပါ, လမ်းပေါ်မှမောင်းသူများသည်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတစ်လှည့်စီလေ့လာရန်လွယ်ကူသည်. ဥရောပအိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အငှားကားသို့မဟုတ်အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်.
IDP သင်လိုအပ်ပါသလား (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Drives ရဲ့လိုင်စင်) ဥရောပ၌မောင်းနှင်ရန်?
ကောင်းစွာ, ထိုကဲ့သို့သောအီတလီကဲ့သို့အချို့သောနိုင်ငံများတွင်တစ်ခုရှိသည်ဖို့နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုအပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ကားမောင်းကျွမ်းကျင်မှု၏သက်သေအဖြစ်. ဒေသဆိုင်ရာကားအငှားအေဂျင်စီများနှင့်ယာဉ်ထိန်းရဲများအနေဖြင့်သင်သည်သင့်တင့်သောမောင်းနှင်သူဖြစ်ကြောင်းစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်သင်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုမတောင်းဆိုသောနိုင်ငံများ၌ပင်လိုင်စင်ယူရခြင်းသည်ကောင်း၏။. လည်း, ခရီးသွားလာမတိုင်မီ, ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးနေသောနေရာများသည်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းသေချာစေရန် CDC နှင့်စစ်ဆေးပါ. စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူ, ဒီမှာစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်5- ဥရောပရှိနိုင်ငံများသို့သွားရောက်လည်ပတ်ရမည်.
1. Santorini, ဂရိနိုင်ငံ
Santorini သို့ရောက်လာသောသူများသည်မြို့သည်ဥရောပသာမကကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတွင်အချစ်ဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်. စုံတွဲတစ်တွဲရှာဖွေနေသည့်ကြင်စ ဦး ဇနီးမောင်နှံများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည် ပျားရည်ဆမ်းခရီး ဦး တည်ရာ. သင်အံ့သြဖွယ် caldera အမြင်များနှင့်နေဝင်ဆည်းဆာများကသင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်. သင်တက်နိုင်သည်, လှေခရီးကိုသွားပါ, သို့မဟုတ်မြို့ရဲ့အနက်ရောင်မီးတောင်ကမ်းခြေမှာဖြေလျော့ပေးခြင်းနေ့လည်ခင်းရှိသည်. သင်ပုလင်းကိုနှစ်သက်လျှင်, သငျသညျနမူနာကိုချစ်ပါလိမ့်မယ် ဒေသခံဝိုင် တလျှောက် မြေထဲပင်လယ်. Santorini သည်အယ်လ်ဖြစ်သည်ဂရိနိုင်ငံရှိဇိမ်ခံကားများဆုံးသောဟိုတယ်အချို့၏နေအိမ်.
2. ဥရောပအိပ်မက်၏အတွေ့အကြုံ: ရေကန် Como, အီတလီ
Como ရေကန်သည်မရေမတွက်နိုင်သောလှပသောအိမ်များနှင့်ရွာများစွာအတွက်ရေပန်းစားသည်, အရသာရှိတဲ့အစားအစာများ (မင်းလား, အီတလီပီဇာ?), နှင့်အံ့သြဖွယ်ဓာတ်ပုံဒေသများ, ၄ င်းတို့အားလုံးသည်နေ့စဉ်ကူးတို့ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသည်. သင့်တွင်အချိန်နှင့်အပိုဒေါ်လာများရှိပါက, သင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးငှား။ ဘဲလ်ဂလီယိုမြို့ငယ်လေးသို့သွားနိုင်သည်. အခြားနည်းလမ်းများ၌, သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည် ဓာတ်ငွေ့သုံးစက်ဘီး နှင့်လှပသောအမြင်များကိုသင်ကိုယ်တိုင်ခံစားပါ. ဒီမှာရာသီဥတုတစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင့်ဒေသ၏ထားကြ၏ - ယဉ်ကျေးမှု၏အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် (များစွာသောခရီးသွား there ည့်ရှိပါတယ်), သင်သည်သင်၏သာမာန်ဘဝ၏ပင်ပန်းခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်စရာများမှလွတ်မြောက်ရန်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးရရှိသည်. Como ရေကန်တွင်ပျားရည်ဆမ်းခရီးအတွက်အတော်လေးစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်.
3. ကျယာဗစျ, အိုက်စလန်
Reykjavik ၏အိုက်စလန်၏မြို့တော်သည်ခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့များဖြစ်သည်, အကြောင်းပြချက်များစွာအတွက်. သငျသညျသမိုင်းအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်, Reykjavik ကိုလှပပြီးကြွယ်ဝတဲ့ပြတိုက်တွေအတွက်သင်ချစ်မြတ်နိုးပါလိမ့်မယ် ဗိုက်ကင်းရေကြောင်းပြတိုက်, အဆိုပါ Einar Jonsson ပြတိုက်, နှင့်အနုပညာပြတိုက်. မြို့တော်ကိုလည်းအံ့ attractions စရာကောင်းသည့်ဆွဲဆောင်မှုများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်, ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာ visitors ည့်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံး entry ကိုဆိပ်ကမ်းကိုအောင်. လာဗားရားများအပါအ ၀ င်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအံ့ဖွယ်ရာများစွာကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်, ရေတံခွန်များ, နှင့်အပြာရောင်ဂွ. ကျောက်တုံးများ, ရေခဲမြစ်, သဲကမ်းခြေ, နှင့်မီးတောင်များသည်ရက်ယာဗစ်ရပ်ကွက်များကိုလည်းသတ်မှတ်သည်.
အစားကောင်းကြိုက်သူများကျောက်မျက်သည်, Sushi Samba နှင့် Baejarins Beztu Pylsur ကဲ့သို့သောနေရာများတွင်ရိုးရာအိုက်စလန်အစားအစာများကိုမြည်းစမ်းရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်. သငျသညျအဏ္ဏဝါတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကိုချစ်လျှင်, သငျသညျ Reykjavik ရဲ့ဆိပ်ကမ်းဟောင်းမှာဝေလငါးကိုသွားနိုင်ပါတယ်, အိမ်ကျော် 20 ကွဲပြားခြားနားသောဝေလငါးမျိုးစိတ်. လင်းပိုင်တွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်, puffins, နှင့်ငန်း, သည်အခြားအဏ္ဏဝါတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အကြား.
4. ဥရောပအိပ်မက်ကိုတွေ့ကြုံခံစား: ပရာ့ဂ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာသည်ပရာ့ဂ်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုနှစ်သက်ကြသည်, အားလပ်ရက်ချီတက်ပွဲကနေနေ့စဉ်တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ချီတက်ပွဲမှ. ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကသင်သွားရောက်လည်ပတ်သည့်အချိန်၌ပရာ့ဂ်၌ Bohemian Carnevale ပါဝင်သောပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်များ။, ဒါမှမဟုတ် ချက်ဘီယာပွဲတော် မေလမှာလာတဲ့အခါ. ဒီမှာညအိပ်မက်ဘဝကလူတွေဘာကြောင့်လာလည်ရတာလဲ, ဂျက်ဇ်ဂီတကလပ်နှင့်အခြားနှင့်အတူ တိုက်ရိုက်လွှဂီတ ဖျော်ဖြေရေးမြင်ကွင်းကြီးစိုး. နှစ်စဉ်ပရာ့ဂ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂီတပွဲတော်သည်ပရာ့ဂ်ဖျော်ဖြေရေးအထူးပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်. မြို့ပတ်လည်မှာတင်းကျပ်တဲ့လုံခြုံရေးကြောင့်တညလုံးပါတီပွဲလုပ်နိုင်တယ်. သငျသညျအနုပညာနှင့်သမိုင်းကိုချစ်လျှင်, Mucha ပြတိုက်သို့မဟုတ် Kafka ပြတိုက်သို့လည်ပတ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်.
5. ဥရောပအိပ်မက်အတွေ့အကြုံ: ပဲရစ်, ပြင်သစ်
ကျော်ကြားအထင်ကရနေရာများ၏တန်ချိန်, အဆုံးမဲ့စျေးဝယ်အခွင့်အလမ်းများ, အရသာရှိတဲ့အစာအမျိုးမျိုးကိုစားနိုင်သည်, ကြွယ်ဝသောသမိုင်း, နှင့်အနုပညာ collection များကို, ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပန်းခြံများနှင့်ဥယျာဉ်များ၌ပါရီသည်လူအုပ်နှင့်မတူအောင်ထင်ရှားစေသည်. Some of the landmarks that you need to see မင်းတစ်သက်မှာ အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် Eiffel Tower လည်း ပါဝင်ပါတယ်။, မြင့်မြတ်သောနှလုံး Basilica, Arc de Triomphe, အဆိုပါ Louvre ပြတိုက်, နှင့် Palais Garnier. သင်ကစျေးဝယ်ဝါသနာပါလျှင်, Rue Du Commerce မှအဆင့်မြင့် Parisian ဖက်ရှင်များနှင့်ပခုံးကြမ်းကြမ်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်, Boulevard Saint Germain, နှင့်အခြားဇိမ်ခံပစ္စည်းများ စျေးဝယ်လမ်းများ. တဖန်သင်တို့အနုပညာကိုချစ်လျှင်, နမူနာဖို့ပဲရစ်န်းကျင်အနုပညာ collection များကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, Musee d'Orsay အပါအဝင်, မူဆယ်အမျိုးသားပီကာဆို, နှင့် Musee du Quai Branly.
ဥရောပသည်“ ရေပုံးစာရင်း” မြို့များနှင့်ခရီးသွား towns ည့်သည်မြို့များနှင့်ဘယ်တော့မျှမဝေးတော့ပါ. ဒါဟာအားလုံးသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်, အချိန်, နှင့်သွားရောက်၏ရည်ရွယ်ချက်. တိုက်ကြီးအတွင်းရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာများကိုလေ့လာရန်အတွက်ဤစာရင်းသည်တံခါးများကိုသာဖွင့်ပေးလိမ့်မည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ကျနော်တို့ခရီးစဉ်စီစဉ်ကူညီရန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်5ဥရောပရှိအိပ်မက်ဆိုးနိုင်ငံများ. ဥရောပကိုဖြတ်ပြီးရထားခရီးစဉ်ကရထားနဲ့သွားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏“ ဥရောပအိပ်မက်:5သင်၏ဆိုက်ပေါ်သို့ဥရောပရှိနိုင်ငံများသို့သွားရမည်? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperiencing-european-dream-must-visit-countries%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အိမ်မက် အိမ်မက် နင် MustVisitCountriesInEurope ခရီးသွားကား ခရီးသွား TravelCzechRepublic travelfrance travelitaly